- Wargeyska Faafiye
Home 2014 November 11 .Warka
Jaamacada Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxay daaha ka rogtay takhasus cusub oo lagu baranayo daweynta guud (Internal medicine) iyadoo kaashaneysa Jaamacado ku yaala wadanka turkiga sida lagu cadeeyay xaflad lagu qabtay xarunta Jaamacada.
Furitaanka taqasuska cusub ee daweynta guud ayaa waxaa iska kaashanaya Jaamacado iyo heyaddo ka jira dalka Turkiga iyo jaamacada Banaadir.
Munaasabada oo lagu furay aayadaha Qur’aan Kariimka ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay hormuudka kuliyadda caafimaadka ee Jaamacada Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Biday isagoo faahfaahiyay ujeedada loo daah-rogayo takhasuskaan cusub ee Internal Medicine.
Dr. Biday ayaa ku nuuxnuuxsaday in ka dib markii ay u soo baxday inay jirto baahi loo qabo barashada Internal medicine ama daweynta guud in Jaamacadu ay go’aan ku gaartay hirgelintiisa.
Waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay Axmed Yuusuf Guuleed oo ah madaxa taqasuska cusub ee daweynta guud (internal Medicine) kaasoo ku dheeraaday qaabka ay ardaydu uga faa’iideysan doonaan barashada taqasuskan mudada uu socdo.
Munaasabada ayaa waxaa goob joog ka ahaa dhaqaatiir badan oo ka socotay Turkiga gaar ahaan dhinacyada ay iska kaashanayaan Jaamacada Banaadir hirgelinta takhasuska Internal medicine, waxaana markiisa Mikrafoonka lagu soo dhaweeyay mid kamid ah oo ku sheegay in ay tahay wax aad loogu farxo bilaabida Internal medicine oo ay si wada jir ah u fulin doonaan Jaamacada Banaadir iyo Jaamacada kale ee Turkiga ah ee kaabaya.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay joogitaankeyga halkaan. Ardada isu qortay ka aflaxida taqasuskan hadda la bilaabayo ee Internal medicine sanadkiiba laba bil ayey ku soo qaadan doonaan Turkiga, way adagtay in ruux ajnabi ah oo Turkiga jooga uu bukaan taabto, hase yeeshee waxaan aan ku guuleysanay inaan qorshahaan ka diiwaan gelino wasaarada Caafimaadka Turkiga oo ogolaansho buuxa ma siisay, waxaana taasi ay suura gelineysaa in muwaadiniinta Turkiga iyo ardada ka faa’iideysaneysa taqasuskan ay fursad isu helaan” masuulkaas ku hadlayey magaca wafdiga ka socday Jaamacadaha Turkiga.
Guddoomiyaha Jaamacada Banaadir Dr. Cabdirisaaq Axmed Maxamed (Dalmar) oo isna munaasbaadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay iney dalka ku soo dhoweeyaan wafdiga dhaqaatiirta ka socda dalka Turkiga oo uu hogaaminayo xubin ka tirsan guddiga sare ee heyadda caalamiga ah ee Doctors Word-wide oo ah heyad ay ku mideysan yihiin illa shan kun oo dhaqtar kuwaasoo ka soo kala jeeda Turkiga iyo dalal kale.
“Dhaqaatiirta heyadda Doctors Word-wide ee hadda nala joogta waxay hadda ka hor dalka ku sameeyeen qaliino ay ka faaiideysteen kumanaan Soomaali ah, hase ahaatee waxay garawsadeen in aysan wax badan soo kordhineyn in mar kasto naloogu yimaado dalka ka dibna howla caafimaad naloo fuliyo, baahidana ay sideeda u sii jirto waxaana taa bedelkeeda la door biday inaan anagu isku filnaano si taas loo gaaro ayaana u bilownay takhasuskan cusub ee daweynta guud oo ah kii ugu horeeyey noociisa ee laga hirgeliyo gudaha dalka” ayuu yiri Dr. Dalmar.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Taqasuskan cusub ee daweynta guud uu yahay kii 3aad ee Jaamacaddu hirgeliso marka la eego dhinaca caafimaadka, isagoo tilmaamay iney horey u hirgeliyeen taqasusyada kala ah, caafimaadka bulshada iyo qaliinka guud.
“Howshu waa iskaashi annagu waxaan bixineynaa xarunta wax lagu baranayo iyo macalimiinta mushaharkooda, jaamacadaha iyo hey’adaha na kaabayana waxay bixinayaan dhaqaatiirta halkaan imaaneysa iyo kuwa tegaya Turkiga Tas’hiilaadkooda” ayuu yiri gudoomiyaha oo u mahad celiyey madaxda jaamacadaha iyo dhaqaatiirta Turkiga ah ee la wadaageysa aqoontooda.
Xildhibaan Prof. Cismaan Maxamuud Maxamed (Dufle) oo ah gudoomiyaha guddiga arimaha bulshada baarlamanka Somalia, kana mid ah aasaasayaashii Jaamacada ayaa gu dambeyn soo xiray munaasabada waxaana uu u mahadceliyay maamulka Jaamacada Banaadir oo uu sheegay in ay u taagan yihiin horumarinta iyo sare u qaadida aqoonta dhaqaatiirta Soomaalida, sidoo kale wuxuu mahadceliyay dhamaan dhaqatiirta, Jaamacadda iyo Hey’adaha Turkiga ah ee gacanta ka geysanaya hirgelinta taqasuskan.
“Kaalmeynta Soomaalida ee Turkigu wado waxay soo bilaabatay 2011-kii oo aheyd xilligii dalku abaarta la daalaa dhacayay, xilligaasoo raisul wasaarihii Turkiga haddana ah Madaxweynaha dalkaas Reccep Dayyib Erdogan uu xaaskiisa, caruurtiisa iyo golihiisa wasiirada keenay halkaan, kaalmadii xiligaas bilaabatayna wali waa socotaa” ayuu yiri Xildhibaan Cusmaan Maxamuud Maxamed (Dufle) oo dhinaca kale ku dheeraaday faaiidada taqasuska daweynta guud.
UK Oo Ugu Deeqday Militariga iyo Booliiska Soomaliya £24.5 Milyan.
B/Mudulood oo digniin u jeedisay M/Shariif
Sarkaal lagu dhaawacay Baydhabo.